के पठाओले घुमाउरो बाटोबाट धेरै भाडा लिन्छ ?
कम्पनी भन्छ- गुगल म्यापले यस्तो भयो
‘…घट्टेकुलोबाट बागदरबार जाने रुट छोटो भएन र ? थापाथलीबाट त्रिपुरेश्वरतर्फ नगएर जावलाखेल हुँदै बल्खु, कलङ्की, कालीमाटी, हुँदै गएर ७ सय डाँडे पनि भइहाल्छ नि !’ पत्रकार तथा लेखक केदार शर्माले केही दिनअघि ट्विटरमा नेपाल पठाओलाई मेन्सन गर्दै ध्यानाकर्षण गराए । पठाओले देखाएको घट्टेकुलोबाट बागदरबार जाने बाटोको नक्सा देखेपछि उनले सुझावको शैलीमा आक्रोश पोखे ।
शर्माको उक्त ट्विटमा धेरै जनाले पठाओले यसरी नै घुमाएर धेरै दूरी देखाउने र बढी शुल्क लिने गरेको अनुभव बाँडेका छन् । पुण्य भण्डारीले आफू चढ्ने रुटमा बाटो घुमाएर ३५ रुपैयाँ बढी लिने गरेको र ठगीको सीमा नै पार गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
शर्माको ट्विटमा जवाफ दिँदै पठाओ नेपालले ट्राफिक जाम र अन्य बाह्य कारक तत्त्वहरूबाट बच्न गूगल म्यापको इन्टरफेस प्रयोग गर्ने गरेको र यात्रुले आफूलाई सहज बाटोबाट यात्रा गर्न सक्ने जवाफ दिएको छ । तर पठाओको यो जवाफ पनि सही नभएको भन्दै प्रयोगकर्ताहरूले भने चित्त बुझाएका छैनन् ।
नेपालमा पठाओ, टूटल, साहारा, ट्याक्सीमाण्डू लगायतका राइड सेयरिङ एप्लिकेसनहरू छन् । तीमध्ये सबैभन्दा धेरैले प्रयोग गर्ने पठाओबाट यसरी ठगिनुपरेको धेरै जनाको गुनासो हुने गरेको छ । केही दिनयता यो विषय सामाजिक सञ्जालमा उठ्न थालेको छ । पठाओ बुक गर्दा घुमाउरो बाटो नक्सामा देखिने‚ तर जाँदा छोटै बाटो भएर गइने भएकाले यो ठगी बन्द गर्न उपभोक्ताले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
ट्विटरमा सरोज केसीले पनि पठाओले देखाएको घुमाउरो बाटोको नक्सासहित ‘के अब हामीले पठाओ सेवा प्रयोग गर्न बन्द गर्नैपर्ने भएको हो त ? बारम्बार जानु छ छोटो बाटो‚ तिर्नु छ लामो बाटोको पैसा’ भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले सेयर गरेको नक्सामा अनामनगर र घट्टेकुलो क्षेत्रबाट माइतीघर, शहीदगेट चाइनाटाउन जाने धेरै छोटो बाटो भएकोमा पठाओको नक्सामा नर्भिक अस्पताल हुँदै त्रिपुरेश्वर घुमेर चाइना टाउन पुग्ने नक्सा देखाएर शुल्क निर्धारण गरेको देखिएको छ । जसमा सही थप्दै गीता चिमोरियाले पनि हैरान भएको उल्लेख गरेकी छन् ।
पठाओमा मोटरसाइकल बुक गर्दा प्रतिकिमी १७ रुपैयाँको दरले तिर्नुपर्छ भने ट्याक्सी बुक गर्दा राष्ट्रिय नापतौल विभागकै दर अर्थात् प्रतिकिलोमिटर ३९ रुपैयाँको दरले तिर्नुपर्छ । टूटलको भाडादर भने पठाओको तुलनामा केही सस्तो रहेको पाइएको छ । तर टूटलको मोबाइल एप्लिकेसन एकदमै ढिलो चल्ने र सही लोकेसन पनि नदेखाउने भएकाले धेरै मानिसले पठाओ चढ्ने गरेको चालक र उपभोक्ताहरू बताउँछन् ।
अनामनगरबाट चाइना टाउनसम्म जाने रुट टूटलमा भने सिंहदरबारबाट भद्रकाली हुँदै जाने बाटो देखाउँछ । र एकै समयमा प्रयोग गर्दा भाडा पठाओको तुलनामा १५ रुपैयाँ सस्तो रहेको पाइएको छ । सोही रुटमा पठाओको ट्याक्सीभन्दा टूटलको ट्याक्सी प्रयोग गर्दा ५३ रुपैयाँ सस्तो पाइयो । नक्सामा देखाइने दूरी नै फरक फरक भएकाले भाडा पनि कम देखिएको हो ।
तर पठाओ नेपालकी बजार प्रबन्धक सुरक्षा हमाल भने यो उठ्नुपर्ने विषय नै नभएको बताउँछिन् । पठाओले हालसम्म गूगल म्याप नै प्रयोग गरेको र ‘वान वे’ प्रयोग गर्नुपर्दा त्यस्तो देखाउन सक्ने उनको भनाइ छ । यस्तो समस्या नआओस् भन्नका लागि पठाओले आफ्नै नक्सा बनाउन लागेको समेत उनले जानकारी दिइन् ।
मंसिरदेखि २० युनिट बिजुली बालेकाे ३० रुपैयाँमात्रै
‘मंसिरदेखि न्यूनतम २० युनिट बिजुली निःशुल्क’
गोदावरी पुष्प प्रदर्शनी शुक्रबारदेखि, ५० लाखको व्यापार हुने अनुमान
महिन्द्राले ल्यायो ट्रियो विद्युतीय अटो, ९६ रुपैयाँ खर्चमा १३० किमी गुड्ने
अति विपन्न ५ लाख परिवारलाई ५ अर्ब बाँड्न कार्यविधि स्वीकृत